Olee otú Jiri VLC dị ka a ihuenyo akada Ngwá Ọrụ?
Olee otú ị na-eji VLC ọkpụkpọ? Ezie na ị pụrụ ji ya na-ekiri videos, ị nwere ike ha mee ihe dị a akada ngwá ọrụ - ma.
N'ihi na ọrụ ma ọ bụ nzube idekọ onye na-echeta, ị na-eji akada ngwaọrụ na kọmputa gị. Ị ma kpọọ desktọọpụ ma ọ bụ ojiji webcam ka ịdekọ vidiyo. E nwere dị iche akada ngwaọrụ ma VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na-enye gị akada arụmọrụ. Ị na-adịghị achọ ihe ọ bụla ndị ọzọ plugin ma ọ bụ atọ software weghara a screenshot.
Iji VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ weghara Desktọpụ
1. Launch VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na-aga media. Ugbu a họrọ on Open Capture Ngwaọrụ.
2. Ugbu a, ị ga-enye ụfọdụ ntinye. Gbanwee Capture mode ka Desktọpụ. Ị nwere ike ịhapụ ndị ọzọ ọmụma dị ka ọ bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ihe akara nke etiti ọnụego, setịpụrụ chọrọ ọnụego maka video. Otú ọ dị, na-edebe ya gburugburu 10.00 f / s.
3. Ugbu a, gaa Play na ala na pịa na abịazi nọdụ triangle ka ịnweta dobe ala ndepụta. Pịa na tọghata.
4. Na-esote mkparịta ụka igbe, tinye chọrọ aha nke mmepụta faịlụ, ịhọrọ ndọtị, na-etinye ya mgbe aha dị ka name.mp4. Ị nwere ike tweak ọzọ site na ịga na ntọala dị ka na-agbanwe agbanwe bit-ọnụego wdg Ozugbo ị họọrọ, nri aha na ọnọdụ nke video nwetara na-amalite button na-amalite ndekọ.
Ị nwere ike iwelata VLC ọkpụkpọ mgbe Ndekọ desktọọpụ na iji ịkwụsị ndekọ dị nnọọ mechie VLC ọkpụkpọ na faịlụ ga-akpaghị aka zọpụta ka chọrọ ebe. Usoro a bụ otu ihe ahụ Windows na Mac kọmputa.
Iji VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ ka ịdekọ na gị kamera
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịdekọ gị onwe onye video eji gị webcam, mgbe ahụ, VLC-enye ezi video akada arụmọrụ na kọmputa gị. The ezi ihe banyere VLC bụ ọ na-enye ndị ọzọ elu nhọrọ dị ka mwube akụkụ ruru nke video, video size, àgwà nke video na ọtụtụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, n'ozuzu àgwà nke video na-adabere na ngwaike nhazi nke webcam. Ebe a bụ otú i nwere ike iji VLC idekọ webcam.
1. Launch VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na kọmputa gị. Jide n'aka dịghị media na-agba ọsọ n'ihi ụda ya ga-e dere. Site Media NchNhr aga Mepee Capture Ngwaọrụ nhọrọ.
2. Na-esote video, ị ga-ezipụta otutu ihe. Akpa na-kpọọ mode kpọmkwem show. Mgbe ahụ Ịgbanwe Video ngwaọrụ aha ka HD kamera na na-na Audio ngwaọrụ aha ndabere ma ọ bụrụ na ị na-agaghị eji ihe ọ bụla okwu ma gbanwee ka okwu bụrụ na gị na-eji otu. Ị nwere ike iji ihe ọnọdụ site na-aga na-elu nhọrọ.
3. Ugbu a na-aga na-egwu na pịa na abịazi nọdụ akụ iji nweta wedaa menu. Họrọ tọghata. Otú ọ dị unu nwekwara ike ịhọrọ iyi ma ọ bụrụ na ị na-eji na-tubà ya.
4. Ozugbo i pịrị na tọghata. Tinye nkọwa dị ka aha faịlụ ndọtị na faịlụ na-aga. Ịhọrọ akụkụ ndị ọzọ nke video si ntọala. Ozugbo gị ntọala ndị ok, i nwere ike ịmalite ndekọ site na ịpị mmalite.
Ị nwere ike ịkwụsị ndekọ site emechi ndị VLC, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ị kwụsịtụ Ndekọ nnọọ iji kwusi bọtịnụ na VLC. Nzọụkwụ ndị a na-arụ ọrụ maka niile na-arụ ọrụ na usoro.
The Ị-kwesịrị-nwere VLC nnyemaaka, Wondershare Video Converter Ultimate
Olee otú Idozi VLC anaghị akwado UNDF Format?
Olee otú Loop Videos Iji VLC?
Olee otú Download na Tinye ndepụta okwu Iji VLC
> Resource> VLC> Olee otú Jiri VLC dị ka a ihuenyo akada Ngwá Ọrụ?